MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardKyite Yar Khaw mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပြည်တွင်းဖုန်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် လက်ကျန်မိနစ်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်မည့် ပထမဦးဆုံး Carry-Over function ပါဝင်သည့် “ ကြိုက်ရာခေါ်” Pack ကို လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် MPTက မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
MPT အချင်းချင်း (သို့မဟုတ်) MPT မှ ဘယ်ဖုန်းလိုင်းကိုမဆို အကြိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်!!!
ကြိုက်ရာခေါ်ပတ်ကေ့ချ်ကို *997#ကိုခေါ်ဆိုပြီးဖြစ်စေ၊MPT4U Appမှဖြစ်စေ အလွယ်တကူရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ၄၉၇ ကျပ် ၃၈ မိနစ် ၇ ရက် Carry over function
[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ရက်အတွင်း လက်ကျန် Voice မိနစ်များ သယ်ဆောင် ခွင့်ရှိသည်] *997# (or) MPT4U App (or) MPT Pay
၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ၉၉၇ ကျပ် ၇၇ မိနစ် ၁၅ ရက်
၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ၁၉၉၇ ကျပ် ၁၅၅ မိနစ် ၃၀ ရက်
ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၉) ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်သည်။
၁။ မည်သည့် ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ကိုမဆို ဝယ်ယူပါက ပြည်တွင်း မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မည်သည့် ဖုန်းလိုင်းကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (special / premium / call center / VAS related numbers မပါဝင်ပါ။) ပက်ကေ့ချ် ၏ မိနစ် နှင့် သက်တမ်းကိုပေါင်းစည်း သယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၂။ ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ ပက်ကေ့ချ်များ ၏ Voice Minutes သယ်ဆောင်နိုင်သောကာလမှာ ယင်း ပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက် အတွင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်များကို အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်၏ အရှည်ဆုံး သက်တမ်းအတိုင်း ပေါင်းစည်း အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
၅။ Voice Minutes သယ်ဆောင်နိုင်သော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ ရက်) အတွင်း ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်အသစ်ဝယ်ယူပါက အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ် Voice Minutes ကို ပက်ကေ့ချ် အသစ် ၏ သက်တမ်းအတိုင်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ Voice Minutes ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်) အတွင်း ပက်ကေ့ချ်အသစ်ထပ်မံ မဝယ်ယူပါက ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ် Voice Minutes များကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၇။ Voice Minutes အချင်းချင်း၏ သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၈။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေချ့် များကို မည်သည့် channel မှ မဆို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ထိပေါက် chance ၁ခု ရရှိကာ MPT4U တွင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ကြိုက်ရာခေါ် အစီအစဉ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကြိုက်ရာခေါ် ဆို သည်မှာ MPT မှ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစု၊မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် သက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ပြည်တွင်း ဖုန်းအားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်လေး ဖြစ်ပါသည်။ special / premium / call center / VAS related numbers မပါဝင်ပါ။
၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ၄၉၇ ကျပ် ၃၈မိနစ် ၇ ရက် Carry over function
၂။ အစီအစဉ်ကို မည်သူတွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
MPT GSM/WCDMA prepaid and postpaid [ဆွေသဟာ(သို့မဟုတ်)ရှယ်ပြော(သို့မဟုတ်)ရွှေစကား နှင့် Base Tariff အစီအစဉ်] အသုံးပြုနေသူများအားလုံး ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Special / premium / call center / VAS related numbers မပါဝင်ပါ။
၃။ အစီအစဉ်ကို ရယူရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း?
*997# သို့ဖုန်းခေါ် ဆို၍လည်းကောင်း၊ MPT4U App (သို့) MPT Money မှ လည်းကောင်း၊ နီးစပ်ရာ MPT အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၄။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား?
၅။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း(သို့) MPT4U App မှတဆင့် လည်းကောင်း စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
၆။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး မိနစ်သယ်ဆောင်ခွင့် ကာလအတွင်း ပက်ကေ့ချ်အသစ် ထပ်မံဝယ်ယူပါက ပက်ကေ့ချ်၏ မူလမိနစ်များ ကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် အရှည်ဆုံး ပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်များ၏ Voice minutes သယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ။
ပက်ကေ့ချ်များ ၏ Voice minutes သယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ ပက်ကေ့ချ် ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက် အတွင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ မိနစ်သယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ မိနစ်တွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
Voice minutes သယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်) အတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်မိနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း Package အသစ်တစ်ခု ထပ်မံ ဝယ်ပါက ယခင်အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်မိနစ်များ ကို ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်း နိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ မည်သည့် channel မှ မဆို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ထိပေါက် chance ၁ခု ရရှိကာ MPT4U တွင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁၀။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
ရပါတယ်။ ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ် များကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U App မှတစ်ဆင့် (သို့) *997# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။